म्याराडोनाको रसिक जीवन- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
म्याराडोनाको रसिक जीवन
दुई साताअघि निधन भएका फुटबल लिजेन्ड डिएगो म्याराडोनाको परिवार ठूलै छ । दशकभन्दा बढी समयको प्रेम सम्बन्धमा उनी कम्तीमा ६ महिलासँग जोडिए । उनका कम्तीमा ८ सन्तान छन् ।
पुस ५, २०७७ बीबीसी
ब्युनस आयर्स — बेलारुसमा केही अचल सम्पत्तिसँगै लडाकु ट्यांक । डिएगो म्याराडोनाको धन–सम्पत्ति जोड्दा यो पनि आउने छ । अर्जेन्टिनी फुटबल व्यक्तित्व म्याराडोनाको दुई साताअघि ६० वर्षको उमेरमा निधन भयो । यससँगै उनले अपार धन–सम्पत्ति पनि छाडेर गएका छन् । यसमा अब कसको हक लाग्नेछ । त्यो भने जटिल विषय बनेको छ । यसको कारण हो, उनको बिन्दास समस्याग्रस्त व्यक्तिगत जीवन ।
खासमा म्याराडोनाको मृत्युसँगै उनको सम्पत्तिलाई लिएर धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । मूल प्रश्न त्यही हो, अब यसको मुख्य हकदार को–को हो त ? म्याराडोनाको परिवार ठूलै छ । दशकभन्दा बढी समयको प्रेम सम्बन्धमा उनी कम्तीमा ६ महिलासँग जोडिए । उनका कम्तीमा ८ सन्तान छन् ।
धेरैको अनुमान छ, उनका सम्पत्ति यिनै सन्तानमा बराबरी बाँडिनेछ ।
तर, म्याराडोनाले आफ्नो सम्पत्ति बाँडफाँट गरेका छैनन् । त्यसैले अर्जेन्टिनी कानुनी विशेषज्ञ र पत्रकारहरू भन्छन्, कसले कति सम्पत्ति पाउने हो, त्यसको लेखाजोखा सजिलो छैन । अनुमान सुरु भएको छ, यसका लागि अदालती लडाइँ सुरु हुनेछ । डीएनए परीक्षण चाहिने छ । केहीले आफू म्याराडोनाको सन्तान हो भनेर दाबी अगाडि बढाउने छन् । त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न म्याराडोनाको सम्पत्तिचाहिँ साँच्चै कति छ ?
ब्युनस आयर्समा कानुन व्यवसायी रहेका एलिस केएर जोफ भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, सम्पत्ति बाँडफाँटमा खुबै झमेला आउने छ र यसको अन्तिम निर्णय आउन पनि धेरै समय लाग्नेछ ।’
म्याराडोनाको जीवन वास्तवमै रंगीन रह्यो । उनका अनेकसँग नजिकको सम्बन्ध रहे, त्यसैले उनका कति सन्तान रहे, त्यो नै मुख्य प्रश्न हुनसक्छ । एकपल्ट उनकी छोरीले ख्यालख्यालमा भन्थिन्, ‘बुबाका सन्तानले त एउटा फुटबल टिम नै बन्छ ।’ म्याराडोनाले लामै समय आफ्ना दुई छोरीबाहेक अन्य सन्तानबारे अस्विकार गर्दै आए । उनका दुई छोरी हुन्, ३३ वर्षीया डाल्मा र ३१ वर्षीया जिनिना । यी दुवै उनका पूर्व श्रीमती क्लाउडियो भिलाफानेबाट जन्मेका हुन् । म्याराडोनाले २० वर्षको वैवाहिक सम्बन्धपछि भिलाफानेसँग पारपाचुके गरे । तर भनिन्छ, विश्वकपका यी विजेता खेलाडीका ज्ञात अन्य ६ सन्तान पनि छन् । सन् २०१० को मध्यमा आएर म्याराडोनाले ३४ वर्षीय डिएगो जुनियर र २४ वर्षीया जाना पनि आफ्नो सन्तान हो भनेर माने । त्यो पनि ती सन्तानका आमाले अदालतमा मुद्दा हालेपछि । सबैलाई थाहा थियो, ती दुई महिलासँग म्याराडोनाको कुनै समय प्रेम थियो । सन् २०१३ मा जन्मेका उनका दोस्रो छोरा डिएगो फर्नान्डोबारे भने खासै विवाद गरेनन्, आफ्नै हो भनेर स्विकारे ।
अहिले ती छोरा सात वर्षका भए । सन् २०१९ मा अझ अनौठो घटना बाहिर आयो । म्याराडोनाका वकिलले भनेका थिए, म्याराडोनाले क्युबामा रहेका तीन बच्चा आफ्नै हो भनेर मानेका छन् । सन् २००० मा कोकिनको कुलत छुटाउन उनी लामै समय क्युबामा रहे । त्यहाँ पनि प्रेमसम्बन्ध राख्न पछाडि परेनन् । अब थप दुई सन्तानबारे भने विवाद कायम छ, २३ वर्षीय म्यागाली लिग र १९ वर्षीय सान्टियागो लाराबारे ।
दुवैले आफू म्याराडोनाकै सन्तान हो भनेर प्रमाणित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइसकेका छन् । यसको सिधा अर्थ उनको सम्पत्तिमा हकदाबी गर्न हो । फेरि सम्पत्तिकै कुरा, यसबारे कोही यस्तै हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैनन् । यसबारे खासमा दुई प्रकारको दाबी छन् । अथवा यसलाई सूत्र पनि भनौं । पहिलो अनुमान, अर्जेन्टिनी मिडियाका अनुसार म्याराडोनाको सम्पत्ति सात करोड ५० लाखदेखि १० करोड डलर हुनुपर्छ । यसबारे अर्जेन्टिनी पत्रकार जुलियो चिपोटाले लामै लेख लेखेका छन् ।
उनको म्याराडोनासँग नजिकको सम्बन्ध थियो । अर्को अनुमान वा सूत्र हो, उनको सम्पत्तिमा तिर्नुपर्ने रकम घटाउने । म्याराडोनाका अनेक उधारोहरू छन् । त्यसैले भनिन्छ, उनका सम्पत्ति त्यसअनुसार ५ लाख डलरमात्र हुन आउँछ । यसको आधार भने अर्जेन्टिनाको एक आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने संस्थाको हो, जसले बजार अनुसन्धान, त्यसको वित्तीय विश्लेषण र भित्री स्रोतलाई सोधेर यो तथ्यांक तयार पारेको हो ।
म्याराडोनाले जति कमाए, त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भाग नेपोलीबाट खेल्दाको हो । सन् १९९० मा न्युयोर्क टाइम्सले लेखेअनुसार उनी त्यो समयमै ३० लाख डलर पारिश्रमिक बुझ्थे । उनका अरू पनि प्रायोजन अनुबन्ध थियो । पछि के पनि समाचार आयो भने म्याराडोनाले अझै ४ करोड ८६ लाख डलर इटाली सरकारलाई कर तिर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म यसको अधिकांश भाग अझै तिर्न बाँकी छ । म्याराडोना आफैंले पनि यो रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अब यो त उनको उत्तरदायित्व नै भयो । त्यसैले हो उनको खास सम्पत्ति ५ लाख डलरको हाराहारीमा मात्र भनिएको । म्याराडोनाका नजिकका एक पत्रकार लुइस भेन्टुराका अनुसार उनी साह्रै खर्चालु स्वभावका थिए, त्यसैले धेरै बचत गर्न सकेनन् । एक टीभी कार्यक्रममा ती पत्रकारलाई हालै सोधिएको छ, के म्याराडोना मर्दा गरिब थिए त ?
अर्जेन्टिनी कानुनअनुसार कसैले पनि आफ्नो सम्पत्तिको एकतिहाइ मात्र अन्य कसैलाई दिन सक्छ । बाँकी सबै उनका सन्तानमा जानेछ, उनको मृत्युपछि । म्याराडोनाले आफ्नो मृत्युपछिको इच्छापत्र पनि छाडेका छैनन् । मृत्यु हुँदा उनका कोही कानुनी पत्नी थिएनन्, त्यसैले सिद्धान्ततः उनको सबै सम्पत्ति उनकै सन्तानमा जानेछ । यो सबै अन्योलबीच भन्न थालिएको छ, कोही कसैले आफ्नो परिवारबारे यस्तै हो भनेर भन्न सकिन्न । यो त ‘भगवान्को हात’ ले निर्धारण गर्ने हो ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७७ ०९:२०
स्पर्स समर्थकको मन जित्दै मोउरिन्हो
कम्तीमा यति त मान्नैपर्छ, जोसे मोउरिन्होले टोटेनहम समर्थकलाई आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । म्यानचेस्टरमा छँदा उनले जे जस्तो भूल गरे, त्यसलाई टोटेनहममा आएर दोहोर्‍याएका छैनन् ।
मंसिर ९, २०७७ बीबीसी
लन्डन — ‘एउटा नरमाइलो समाचारपछि अर्को खराब समाचार ।’ अनि ‘गलत दिशातर्फ उठाइएको कदम ।’ जतिबेला सन् २०१९ को नोभेम्बर २० मा टोटेनहमले माउरिसियो पोचेटिनोलाई बर्खास्त गर्‍यो र उनको स्थानमा व्यवस्थापक जोसे मोउरिन्होलाई नियुक्त गर्‍यो ।
स्पर्स समर्थकबाट यस्तै यस्तै प्रतिक्रिया आए । जहाँ पोचेटिनो आक्रामक र प्रगतिशील व्यवस्थापक थिए, त्यहीं मोउरिन्हो रक्षात्मक र पुरातन खाले थिए । पोचेटिनोले झन्डै–झन्डै टोटेनहमलाई घरेलु र युरोपमा सफलतासम्म पुर्‍याएका थिए । मोउरिन्हो भने ‘पार्क द बस’ सोचका थिए, जसलाई त्यसको केही समयअगाडि मात्र म्यानचेस्टर युनाइटेडले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि अहिले टोटेनहम इंग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्षस्थानमा छ र मोउरिन्होको नेतृत्वमा टिमले सकारात्मक खेलिरहेको छ ।
शनिबारमात्र यो सिजनको सबैभन्दा उत्कृष्ट र वजनदार नतिजाका रूपमा टोटेनहमले घरमा म्यानचेस्टर सिटीलाई २–० ले हरायो । सिटी अर्थात् गत सिजनको लिग उपविजेता । र, सबैलाई लागिरहेको छ, अब त स्पर्स समर्थकले पनि मोउरिन्होलाई माया गर्न थालेका छन् । भनौं, के तिनले यी पोर्चुगाली प्रशिक्षकलाई समर्थन गर्न थालेका हुन् त ?
यसको उत्तर खोज्नु अगाडि फेरि एकपल्ट पुरानै दिनमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । सुरुमै लेखिए जस्तै । मोउरिन्होको नियुक्तिलाई लिएर अधिकांश प्रतिक्रिया नकारात्मक नै थिए, अझ केही त चर्को रूपमै आलोचनात्मक थियो । केहीलाई एक प्रकारको डर थियो, कतै उनले नकारात्मक फुटबल खेलाउने त होइन ? अनि खेलाडीसँग उनको सम्बन्ध ब्रिग्रिने त होइन ?
एकदमै समृद्ध इतिहास भए पनि, जतिसुकै सफलता हात पारे पनि पछिल्लो समय मोउरिन्होको प्रदर्शन एकनासको छैन । त्यसमाथि उनले जुन क्लब सम्हालेर नाम कमाएका थिए, त्यो टोटेनहमको छिमेकी शत्रु हो । त्यो भनेको चेल्सी । जतिबेला उनलाई टोटेनहमले व्यवस्थापकका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, उनले आफूलाई पाठ सिकेका व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहे । त्यही बेला केही समर्थकले यतिसम्म भने, ‘यो त कोही दैत्यसँग गरिएको सम्झौता जस्तै रह्यो ।’ केहीले यस्तो पनि भने, ‘टोटेनहमले त आफ्नो आत्मा नै बेच्यो ।’
जतिबेला पोचेटिनो बर्खास्तगीमा परेका थिए, त्यतिबेला टोटेनहमले ५ खेलमा कुनै जित निकाल्न सकेको थिएन, अंकतालिकाको १४औं स्थानमा थियो । टोली शीर्षस्थानमा रहेको लिभरपुलसँग २० अंकले पछाडि थियो ।
त्यो पनि १२ चरणको खेल सकिँदा मात्र । मोउरिन्हो आएयता पनि टिमको प्रदर्शन एकनासे रहेन, तर लिग सकिँदा छैटौं स्थानमा रह्यो । लकडाउनपछि लगातार ६ खेलमा अपराजित रहेपछि यो सुधारिएको स्थान हात परेको हो । अहिले त्यसको तुलनामा प्रदर्शन निकै राम्रो छ, ९ खेलमध्ये ६ मा जित अनि त्यसमाथि २१ गोल । अझ टिमको प्रदर्शन झनै उत्कृष्ट ।
शनिबारको खेलमा मोउरिन्होले उत्कृष्ट व्यवस्थापनको नमुना नै पेस गरे । एकातर्फ टोटेनहमको रक्षापंक्ति सुदृढ देखियो र सिटीलाई आक्रमणको बिरलै मौका दियो, त्यही त्यहीं आफ्नै आक्रमण भने उम्दा रह्यो । ठीक समयमा टोटेनहमले ‘काउन्टर’ आक्रमण मात्र बुनेन, टिमको प्रदर्शन आफैंमा तीव्र गतिको थियो । बिस्तारै मसिनो स्वरमा दाबी सुरु भयो, टोटेनहमले लिग जित्न बेर छैन ।
अहिले समर्थकको प्रतिक्रिया यस्तो छ– ‘हामी शतप्रतिशत गलत रह्यौं मोउरिन्होलाई लिएर ।’ ‘अहिले हामीले फरक टोटेनहम देखिरहेका छौं ।’ अनि ‘मोउरिन्हो जत्तिका प्रशिक्षक अरू कोही पनि छैनन् ।’ कम्तीमा यत्ति त मान्नैपर्छ, मोउरिन्होले टोटेनहम समर्थकलाई आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । म्यानचेस्टरमा छँदा उनले जे जस्तो भुल गरे, त्यसलाई टोटेनहममा आएर दोहोर्‍याएका छैनन् । अहिले उनीमाथिको अविश्वास जड भत्किँदै छ ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ ०९:५१